နည်းနည်းထူးဆန်းသွားလား သူငယ်ချင်း ! ! ငါတို့က ချမ်းသာဖို့ ပိုက်ဆံစု ပါပဲ သိခဲ့တာလေ......
သူဌေးဆိုတဲ့ လူတန်းစားတွေကို ကြည့်လိုက်စမ်းပါ သူငယ်ချင်း......
ငါတို့ သာမာန်အလုပ်သမားဘဝတွေကို ကြည့်လိုက်စမ်းပါသူငယ်ချင်း....
ငါတို့လို သာမာန်အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာ ငါတို့ရဲ့ အသုံးစရိတ်ဖြစ်သွားတယ်
ဒါပေမဲ့ သူဌေးတွေရဲ့ အသုံးစရိတ်ဟာ သူတို့ရဲ့ ဝင်ငွေပြန်ဖြစ်သွားလို့ပဲ သူငယ်ချင်း....
Workers spend what they get, Rich men get what they spend... တဲ့
အလုပ်သမား= ဝင်ငွေ to အသုံးစရိတ်
သူဌေး = အသုံးစရိတ် to ဝင်ငွေ
ဒါဆို သူဌေးတွေ ဘယ်လို ပိုက်ဆံသုံးတာလဲ?
သူဌေးတွေဟာ investment spending လို့ခေါ်တဲ့ ရင်နှီးမြုပ်နှံဖို့ အတွက် ပိုက်ဆံ သုံးကြတယ်.....
သူတို့ ရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ ...လုပ်ငန်းတွေချဲ့ထွင်ဖို့ ပညာသစ်တွေရဖို့ အတွက်သုံးကြတယ်.....
ဒီတော့ သူတို့သုံးသမျှက သူတို့အတွက် ဝင်ငွေပြန်ဖြစ်လာတယ်
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ဟာ ချမ်းသာပြီးရင်းချမ်းသာတော့တာပဲ.....
သာမာန်အလုပ်သမားတွေ ဘယ်လို ပိုက်ဆံသုံးကြလဲ?
ဝင်ငွေကို ဘယ်လိုသုံးမလဲပဲ စဉ်းစားတယ်
အသုံးစရိတ်ကနေ ဘယ်လိုဝင်ငွေ ရအောင်လုပ်မလဲ မစဉ်းစားကြဘူး.....
ဒီလိုနဲ့ ဆင်းရဲပြီးရင်းဆင်းရဲ လာတာပေါ့......
သူဌေးတွေဟာ ပိုက်ဆံရှာဖို့ သုံးတယ်
သူဌေးတွေရဲ့ အသုံးစရိတ်ဟာ သူတို့အတွက် ဝင်ငွေပြန်ဖြစ်တယ်..... (များများသုံး.. များများချမ်းသာ)
အလုပ်သမားတွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာတော့ သူတို့အတွက် အသုံးစရိတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်.... (များများသုံး .. များများဆင်းရဲ)
မင်းရဲ ပိုက်ဆံကို ဆင်းရဲဖို့အတွက် သုံးမလား? ချမ်းသာဖို့အတွက် သုံးမလား?
ချမ်းသာဖို့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ...
Credit ; Nay Min Kha
Read 8346 times Last modified on Tuesday, 15 May 2018 16:46
အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့် နည်းပညာသင်တန်းအတွက် သင်တန်းသားများခေါ်ယူ
စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာအုပ်တွေထဲမှာ ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ အချက်(၅) ချက်